SOMALITALK - FINLAND
MAXEY LUQADAADA HOOYO MUHIM U TAHAY?.
Qoraalkan oo ku qoran Finish ... Guji halkan
Väestöliiton Kotipuu, waa mashruuc caawiya reeraha ajnibiga ah. Luqadaada hooyo waxay muhim u tahay xiriirka idinka dhaxeeya adiga iyo ilmahaaga iyo sidii aad isu fahmi la heydeen, waxay kaloo muhim u tahay caruurta wax barashadooda. Caawinaad aynu caawineyno hor u marinta luqada soomaaliyeed ayaan waxaan waalidiinta soomaaliyeed ee degan Helsinki u qaban qaabiney siminaar looga hadlayo luqada soomaaliyeed.
Siminaarkan waxaa marti ku ah kana hadli doono Dr. Georgi Kapchits oo ku takhasusey luqadda soomaaliga. Wuxuu af-Soomaaliga ka dhigi jirey Jaamacadaha Moscow iyo Barliin. Wuxuu kaloo ku wareegey wadamada dibada ee ay Soomaalidu deganyihiin sida: Kanada, Denmark, Jarmalka. Waxaynu nasiib wanaag u helney hadda in uu noogu yimaado Helsinki, asagoo siminaarkan ka hadli doona, af- Soomaalina uu ku hadli doono.
Wakhtiga: Arbaco 17.03.2004 Saacada: 17:00 ilaa 20:00
Meesha : Hotel Aurora, oo ku yaal wadada (Helsinginkatu 50)
Hoteelkaas wuxuu ku yaalaa Iskuulka Diakoni gadaashiis.
Siminaarkaas waalidiintu waa u lacag la`aan, laakiin waa muhim iney isa soo ogeysiiyaan telefoonkan 2280 5143 Mohamed Moallin ( isa soo diiwaan geliyaan) ugu danbeyn Isniinta 15.03.2004. Haddii waalidiintu ay u baahanyihiin inta siminaarku uu socdo in loo hayo caruurta, taasna waa suurta gal, laakiin waan in ay soo sheegaan oo ay la soo xiriiraan telefoonkaas sare ugu danbeyn 15.03.2004. ( Caruurta la heyn karo ugu badnaan waa 15).
Siminaarkan waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey isuguna soo duba ridey Väestöliiton Kotipuu iyo Abdulkadir Isak oo ah Koulukuraattori oo ka socda wasaarada waxbarashada.
17.00 – 17.15 Soo dhoweyn ” Reeraha Ajnabiga ah iyo Väestöliiton Kotipuu”
Waxaa ka hadli doono Mohamed Moallin oo ka socda Väestöliiton Kotipuu
17.15 – 17.30 Sidee ayaa caruurta aan luqadooda si wanaagsan ugu hadlin looga dareemaayaa wax barashadooda. Waxaa ka hadli doona koulukuraattori Abdulkadir Isak
17.30 – 18.30 Dr. Georgi Kapchits: ” Waxyaalaha lagu aqoonsado afka iyo suugaanta soomaaliyeed
( Waaya`aragnimadii aan ku yeeshey barashadooda iyo bariddooda)
- Sidee ayaa caruurta loo tusi karaa in luqadooda ay tahay mid qurux badan oo qani ah
- Sidee ayaa loo soo bandhigi karaa in luqada soomaalida ay caado u leedahay soo jiidasho
- Sidee ayaa caruurtu loo fahamsiin karaa in luqadooda hooyo ay tahay mid qiima (macna) leh
- Barida luqada iyo dhaqanka xaga waalidiinta ay ka joogaan
18.45 – 20.00 Wada sheekeysi iyo su`aal is weydiin
Faahfaahin intaas dheer kala xiriir:
Mohamed Moallin Mohamed
Faafin: SomaliTalk.com | March 5, 2004